Global Voices teny Malagasy » Topi-maso momba ireo fitokonana amin’ny toetr’andro manerana an’i Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Septambra 2019 10:46 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Indonezia, Malezia, Myanmar (Birmania), Singapaoro, Thailandy, Vietnam, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Teratany, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Olona 200 mahery no nanao diabe  niainga avy ao amin'ny tsena vaovao Bogyoke ho any amin'ny Pagoda Sule, ary avy eo nivory teo ivelan'i Vala Mahabandoola tao Yangon tamin'ny 21 septambra. Nanentana ny governemanta any Myanmar izy ireo mba hanambara ny hamehana amin'ny toetr'andro, hametraka fiatoana maharitra amin'ireo tetikasa manimba ny tontolo iainana, ary hampiroborobo ny rariny ara-tontolo iainana.
Tanora mpiaro ny tontolo iainana maherin'ny 600 no nandray anjara tamin'ny fananganana endrika Tany-Olombelona tany Manila no sady nitondra sora-baventy mitaky ny rariny ho an'ny toetrandro tamin'ny 20 septambra. Niampanga  ny fitomboan'ny famonoan'olona tsy ara-pitsarana mikendry ireo mpiaro ny tontolo iainana sy ireo mpiaro ny zo momba ny tany eo ambany fitantanan'ny governemanta Rodrigo Duterte izay tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2016 izy ireo.
Tanora mpiaro ny tontolo iainana maherin'ny 150 no nanao fihetsiketsehana die-in  teo anoloan'ny Minisiteran'ny Harena voajanahary sy ny tontolo iainana Thailandy tamin'ny 20 Septambra. Nametraka fanangonan-tsonia izy ireo, nangataka ny governemanta mba hanaisotra tsikelikely ny arina ary hanolo izany amin'ny angovo azo havaozina. Naharay ny taratasy ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta ary nankasitraka ny ahiahin'ireo tanora ho amin'ny tontolo iainana.
Maherin'ny 300 ny olona nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana nokarakarain ‘i Klima Action Malaysia tamin'ny 21 Septambra. Nampifandraisin'izy ireo tamin'ny krizin'ny toetrandro ny loton'ny zava-tsetroka miha-mitombo ary nangataka tamin'ny governemanta izy ireo mba hanadihady ireo orinasa tompon'antoka amin'ny famatsiam-bola amin'ny fandripahana ala any Malayzia sy Indonezia.
Nilaza ny tatitra fa tanora arivo mahery no nanao diabe  tany Jakarta tamin'ny 20 Septambra. Nokianin'izy ireo ny tsy fahombiazan'ny governemanta hampitsahatra ny doro ala any Sumatra sy Kalimantan izay nahatonga ny fandotoana setroka be tsy tany Indonezia ihany fa tao Malayzia sy Singapaoro ihany koa. Ny fanitarana ny fambolena sy ny fanajariana ny tany amin'ny fomba tsy ara-dalàna no tompon'antoka amin'ny doro tanety ao amin'ny firenena.
Tarihin'ny feo matanjak'ireo tanora mitaky ny ady amin'ny olana maika momba ny toetr'andro sy ny fanerena ireo mpanao politika mba handray fepetra manoloana ny olana ara-toetrandro ny #ClimateStrike  ao Jakarta
Nanana taha-pandraisana anjara lehibe i Singapaoro nandritra ny fitokonana momba ny toetr'andro tamin'ny 21 septambra tao amin'ny Hong Lim Park. Olona roa arivo teo ho teo no nanatevin-daharana  ny hetsika miantso ny governemanta mba hanala ny karibaona amin'ny toe-karena ary hampihena ny famoahana etona mpampitombo hafanana. Nitafy mena ireo mpandray anjara mba hanamarihana ny olana maika momba ny toetrandro atrehintsika ankehitriny.
Nanomboka tamin'ny #sgclimaterally  omaly, sary nalain'ny namako. Nanantena ireo mpikarakara (sy ny sinika hannah) fa olona 500 no ho avy – nilaza ny Singapaoreanina 2000 fa leon'ny zavo-tsetroka ary niseho. Mahatsiaro ho mirehareha aho fa Singapaoreana anio
Sambany nidina an-dalambe ny olona ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh mba hanatevin-daharana ny #ClimateStrike , mitaky fepetra ara-tontolo iainana matotra sy maika ho an'ny tanànany izay anisan'ireo tena voakasik'izany indrindra, rahonan'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny loton'ny rivotra izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/25/143463/
 nanao diabe: http://www.mizzima.com/article/climate-strike-protesters-take-streets-myanmar
 nanao diabe: https://jakartaglobe.id/vision/climate-defenders-strike-back
 taha-pandraisana anjara lehibe : https://www.facebook.com/pg/SGClimateRally/photos/?tab=album&album_id=397210787515884&__xts__%5B0%5D=68.ARDF84h5boS0zSmKTK0q3ftj6lCpsNkbrmvVN_6w_74_SbbH8Er_6oHpGFHJEaf9S63D_AvciS_OaFq-3VWhaVj1w_sAZJfwE1g3o8FnbeyITfqztZj0b_MloloEeTeAvQ0o6LvlNhYSXBWVdtOOXxOWF9E7_BhCQ3yU1aRTvsvRj1F_BfUv9ly9a6CdUDm65SDiG1nAmVmPCIP8b4O1gJfqiH8uDMbGQ9fewZjU_4_534qXjwvXdtTgiq_UFTA5fLHRylXKhUJjcKJOn5KJBggQoyVxdjY73rqmHLlPdjkAj89HNh2f-9B3P5KQgjaXSEceB2CnX7D3ErhnqKqRmFtnXovduFg7OzyL8HeiC3dHRhVV_VDvaDfA2lyg9sX4Ziycxu73jmZo_j2LIMNb_gtx7wQHjX-hRDtbIprv0Mv6-G_JZ0g9UQZogczKFZJmqqPrYM3oR41exbyWBzw&__tn__=-UCH-R